क्रिसमस मा 12 meatless व्यञ्जन
गर्न मिति तस्वीर को चर्च छ परिवर्तन, मन्दिर छ नियमित भ्रमण गरेर छोराछोरी, जवान मान्छे र पुरानो पुस्ता। विशेष गरी मसीही विश्वासीहरूलाई सबै स्थितिहरु अघि विशेष गरी पोस्ट पालन, क्रिसमस र पवित्र इस्टर। उपवास समावेश पशु मूल को खाना बाट abstinence - छ दूध, मासु, अन्डा, र ती सबै व्युत्पन्न उत्पादनहरू हुन्। क्रिसमस अघि, हामी दुई पटक तालिका राख्नु निर्णय:6जनवरी - क्रिसमस हव्वालाई तालिका दुबला हुनुपर्दछ, र जनवरी7मा - लागि क्रिसमस नै, त्यहाँ पहिले नै सम्भव अन्डा, दूध र मासु बाट व्यञ्जन खाना पकाउनु छ पहिले नै। ती सबैभन्दा परम्परा साझेदारी र क्रिसमस मा 12 meatless व्यञ्जन पकाउन। संख्या 12 प्रेरितहरूको संख्या प्रतिनिधित्व, तिनीहरू केवल 12 मान्छे थियो। पनि, तिनीहरूले 12 - कसैले क्रिसमस मा 12 meatless व्यञ्जन क्रिसमस बिदा को दिन को संख्या प्रतीक भनेर सोच्छ।
के खाना र कसरी विविधता हुनुपर्छ Lenten तालिका? यो प्रश्न मलाई सहित धेरै mistresses, गर्न चासो छ। धेरै वर्ष को लागि, म "बन्द भएको छ" Lenten मेनु, र म र मेरो परिवार व्यञ्जनहरु म आज तपाईंसँग साझेदारी हुनेछ जाँच गरियो।
meatless व्यञ्जन धेरै सानो छ भन्ने लाग्छ भने, त्यसपछि तिमी गलत हो, तिनीहरूले विशाल छन्। यहाँ क्रिसमस सबैभन्दा रोचक 12 meatless व्यञ्जन हो।
1 को तातो दुबला solyanka मशरूम सही मा। उनको लागि, हामी मशरूम (हिउँदमा, पाठ्यक्रम, विकल्प सानो छ, त्यसैले म पनि ड्राई लाग्न सक्छ ताजा मशरूम प्रयोग) आवश्यक बन्दागोभी एउटा सानो टाउको, एक गाजर, दुई प्याज, दुई वा तीन अचार, साना आलु, नुन, जडीबुटी, तेल र मरिच। त्यसैले, हामी पानी, जोश को मशरूम र प्याज थाल्छ सम्म आगो पानी राखे। गोभी, गाजर, आलु र अचार पीसने। पानी उम्लिरहेको मा एकांतर जोश दिने, कच्चा तरकारी छोड्नु, त्यसपछि मशरूम जोश दिन र गर्मी-झोला बाट हटाउने अघि, थप लसुन, जडीबुटी र वनस्पति तेल। पहिलो पकवान तयार छ।
2. vinaigrette appetizer तयार गर्न। उहाँलाई लागि, हामी उसिनेर बीट, गाजर, आलु, मसालेदार ककडी, बैंक क्यान्ड मटर, जडीबुटी र नुन को आवश्यक छ। तरकारी म कट सानो घन, जडीबुटी सूक्ष्मता रुबल, र त्यसपछि जडान सबै सामाग्री, म नुन, अनुभवी संग तेल र सलाद तयार छ। तपाईं सलाद तेल भर्न छैन भने त, तेल बिना meatless भोजन खान सख्त उपवास मा, यो एक कठोर दिनमा तालिका ल्याउन सक्छ।
3. तेस्रो पकवान मेरो डेस्क भयो compote सुक्खा फल। सुरुमा, म, एक फोडा गर्न पानी ल्याउन त, चीनी थप्न फेरि एक फोडा गर्न ल्याउन र सुकेको फल फेंक: किसमिस, सुकेको स्याउ, छाँट्दछ र सुकेको खुबानी।
4 स्थान मेरो तालिका मा दोस्रो तातो खाना दुबला लिन्छ तरकारी स्ट्यु। यसलाई बनाउनको लागि, तपाईं कुनै पनि तरकारी, लिन म सामान्यतया आलु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, ताजा टमाटर (तपाईँले किन्न भने गर्न सक्दैन, टमाटर को पेस्ट), zucchini, बन्दागोभी, गाजर, घण्टी खुर्सानी, स्वाद प्याज, लसुन, नुन र तेल। पकाउने विशेष नियम, म अडिग छैन, त्यसैले सबै तरकारी, म नुन र पानी एउटा सानो रकम को वाहेक संग लास shred। एक घण्टा स्ट्यु पछि तयार छ।
5 धेरै स्वादिष्ट प्राप्त meatless मशरूम संग भरी र आलु। तीन ठूलो आलु, मशरूम को 20 ग्राम, ठूलो बल्ब को एक जोडी लिएर को तयारी को लागि। भुट्नु मशरूम र प्याज, आलु एक भद्दा grater मा rubbed र मशरूम जडान। साल्ट। त्यसपछि बन्दागोभी पात scalded लास मा र्याप र कोमल सम्म simmered भराई। तालिकामा एक टमाटर सस वा पेस्ट संग सेवा गरे।
6 परिवर्तन को लागि, तपाईं aspic मा तरकारी पकाउन गर्न सक्नुहुन्छ। म कुनै पनि तरकारी लिन र gelatin को नुन समाधान तिनीहरूलाई भर्नुहोस्। एक घण्टा पछि, appetizing aspic तयार छ।
7 आफ्नो Lenten तालिकामा म आलु संग पकौडी गर्नेछन्। के यो, तयारी आटा रूपमा पकौडी, तर बिना अन्डा। एक भर्नको रूपमा तला प्याज संग Mashed आलु प्रयोग गरेर। त्यसपछि sculpt पकौडी, जोश र सेवा संग वनस्पति तेल।
8 मिठाई लागि, महाराज जेली एक तरकारी फिलर को सिद्धान्त मा। कटा फल, ग्लास तिनीहरूलाई राख्नु र यो समय मिठाई gelatin समाधान खन्याउन।
9 क्रिसमस मा एक 12 meatless व्यञ्जन डायल गर्न, म तालिका धारण अचार को एक किसिम, खीरे यो टमाटर स्लाइस "बुल्गेरियन मा", "चेक", छोटो, त्यहाँ तहखाने छ कि सबै मा।
10 मसले आलु सधैं अग्रिम तयार छ जो sauerkraut, सेवा गरे।
11 टेबल मा दोस्रो मिठाई मह, पागल र सुकेको फल संग पाकेका स्याउ दुबला हुनेछ।
12 अनि, अन्त मा, बाह्रौँ पकवान marinated मशरूम, लसुन र हरियो प्याज संग अनुभवी हुनेछ।
यसरी यो भाँडा दुबला भोजन स्वाद र उपस्थिति दुवै धेरै विविध छ कि स्पष्ट छ।
टोफु यो उत्पादन र कसरी खान के हो?
कति नेभारा र क्यालोरी कि त यो स्वास्थ्य को लागि राम्रो छ?
Sakura, को बढ्दो सूर्य एक प्रतीक कसरी आकर्षित गर्न
Airat: मूल्य नाम र यसको सुविधाहरू
पोर्ट "Kavkaz"। नौका पोर्ट "Kavkaz"
बच्चाहरु को लागि भिटामिन जटिल "बहु-ट्याबहरू" (बच्चाहरु)। निर्देशन
प्रोटिन कुकीज - स्वस्थ खाजा
स्मार्टफोन "लेनोभो A706": विशेषताहरु, फोटो, समीक्षा
Hepatomegaly: कलेजो परिवर्तन विस्तृत। आन्तरिक अङ्गहरूको संरचना
दही र खनिज पानी मा छिटो र सजिलो नुस्खा ह्यास
"फास्ट र थोरै 7" कता गोली पर्यो? सनसनीखरी चलचित्रको फिलिमको बारेमा सम्पूर्ण सत्य।
बुल्गेरियन भाषा। बुल्गेरियन पर्यटक भाषा। शुरुआती लागि बुल्गेरियन